Ndilisebenzise igama ukungxama kuba yile nto siyibonayo. Asisayi kuze siyeke ukuphanda umba, silinde iinyani, okanye sihlalutye imeko yemeko. Akukho mpendulo, kodwa inemvakalelo kuphela. Andikwazi ukunceda kodwa ndicinge ngeqonga lanamhlanje leendaba zosasazo njengeColosseum enesikhalo esivela kwisihlwele esinezithupha. Umntu ngamnye onqwenela ukujolisa kumsindo wabo aqwengwe atshatyalaliswe.
Ukutsiba ekugxothweni kwezentlalo kulula kuba asimazi ngokwasemzimbeni umntu, okanye abantu abasemva kophawu, okanye sinentlonipho kumagosa aseburhulumenteni avotele iofisi ngabamelwane bethu. Okwangoku, akukho kulungiswa komonakalo owenziwe ngumhlambi… nokuba umntu ebefanelekile okanye hayi.
Ukuba siza kuqhubeka sihamba ngale ndlela, kuya kufuneka sibengabantu abangcono. Kuya kufuneka sifune ukuxolelana ngokukhawuleza njengoko sifuna ukutshabalalisa omnye nomnye. Abantu abaqhelekanga, kwaye akufuneki sigwetywe njengokulungileyo okanye okubi. Kukho abantu abalungileyo abazenzayo iimpazamo. Kukho abantu abangalunganga abajika ubomi babo baba ngabantu abamangalisayo. Kufuneka sifunde ukulinganisa izinto ezilungileyo ezikhoyo ebantwini.
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lokudibana neAmazon kwesi sithuba.